प्रवास – ताजा समाचार
के अष्ट्रेलियामा नेपाली बिधार्थीले खाना खान नपाएकै हुन् त ? बाबा आमा हामी ठिक छौ – छोराको संदेश
चर्चित पत्रकार तथा हास्यकलाकार मदन कोइरालाले अस्ट्रेलियामा अध्यनरत अन्तराष्ट्रिय नेपाली बिद्यार्थीहरुको वर्तमान परिस्थिति बारे एक रिपोर्ट तयार पारेको छन । पछिल्लो दिनहरुमा विभिन्न समाचारमा अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली बिधार्थीले खाना पाएनन्, सडकको बास भो भन्ने खालका समाचार आएपछि चर्चित पत्रकार कोइरालाले केहि बिद्यार्थीहरुलाइ के हो त अवस्था बुझ्ने प्रयास गरेको थिए। यस अघि अस्ट्रेलियाका प्रधान मन्त्रीले […]
यूएई – कोरोनाको कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा यूएईमा ११ जना नेपालीको शव रोकिएको छ । उडान नभएपछि लकडाउनअघि र त्यसपछि ज्यान गुमाएका ११ नेपालीको शव यूएईमै रोकिएको हो । विभिन्न कारणले ज्यान गुमाउने ११ नेपालीको शव अहिले यूएईका अस्पतलामै छन् । रुपन्देहीकी बिनु पराजुलीको मृत्युपछि मात्रै मृत्युको कारण कोरोना भएको अस्पतालले पुष्टि गर्‍यो । […]
काठमाण्डौ – मलेसियामा लकडाउनको अवधि फेरि दुई हप्ता थपिएको छ । यसअघि १८ मार्चदेखि १४ अप्रिलसम्म तोकेको लकडाउनको अवधि दुई हप्ता थपेको हो । अब २८ अप्रिलसम्म मलेसियामा लकडाउन कायम रहनेछ । कोरोना सङ्क्रमण रोथामका लागि मलेसिया सरकारले मार्च १८ देखि नै लकडाउन जारी गरेको हो । त्यसैले यो अवधिमा लकडाउनको पालना गर्न पनि दूतावासले […]
युएई। कोरोना भाइरसको सम्भावित खतराबाट जोगाउने उद्देश्यले दुबईमा रहेका नेपालीहरुको विवरण संकलन गर्न थालिएको छ। एनआरएनए युएईसँगै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ युएई,शेर्पा किदुङ,नेपाल मगर संघ युएईको संयुक्त पहलमा विवरण संकलन गर्न थालिएको हो। दुवईको स्थानीय सुरक्षा निकायको समन्वयमा गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) युएईसहित अन्य नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरुले आज वरदुबई स्थित नेपाली बसोबास गर्ने स्थानहरु मिनाबजार,अल […]
माेदीकाे कुरा झुठाे साबित : भारतीय शहरमा नेपाली मजदूरको बिचल्ली,सडकपेटीमै दिनरात बिताउँदै
विगत ६ वर्षदेखि महाराष्ट्रको मुम्बैस्थित दादरको एक होटलमा चाइनिज कुकमा कार्यरत कञ्चनपुरको दोधारा चादँनीका सुरजसिंह कार्कीको दैनिकी विगत एक महिनायता फेरिएको छ । निरन्तरको बसाइले त्यहाँ धेरै घुलमिल उहाँ यतिबेला कोरोना भाइरसको जोखिम हुन नदिन भारतले लगाएको लकडाउनपछि विचल्लीमा परेका नेपालीलाई सम्पर्कमा ल्याउन व्यस्त हुनुहुन्छ । “घरबाट बुवा÷आमाको रातो टीका र धन कमाउने आर्शीवाद लिएर […]
बेलायतमा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या ७ पुग्यो
२८ चैत । लण्डन: कोरोनाभाइरसका कारण बेलायतमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या ७ पुगेको छ । पछिल्लो पटक एकै दिन २ नेपालीको ज्यान गएपछि यहाँ ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या ७ पुगेको हो । यसअघि बुधबार एकै दिन ३ जनाको मृत्यु भएपछि यहाँ ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या ५ पुगेको थियो । यहाँ ज्यान गुमाउने पछिल्ला २ जना […]
दुबईमा थप ३ नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित ! संक्रमितको संख्या ११ पुग्यो
काठमाडौँ । खाडी मुलुक यूएईमा थप ३ जना नेपालीमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संक्रमित भएका छन् । योसँगै यूएईमा कोरोना संक्रमित नेपालीहरुको स‌ख्या ११ पुगेको छ । तीमध्ये २ जना भने उपचारपछि यसअघि नै निको भैसकेका छन् । यूएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्ण प्रसाद ढकालले थप ३ जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको बताए । ‘ हामीलाई […]
काठमाडौं – विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसका कारण अमेरिकामा मृत्यु भएका भनिएका ङिमा टेम्बा शेर्पा जीवितै रहेको रहेको बताइएको छ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा बस्दै आएका नेपाली नागरिक ङिमा तेम्बा शेर्पा जीवितै रहेको उनका परिवारले जनाएका छन् । आइतवार राष्ट्रिय समाचार समितिले कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट अमेरिकामा ४ जनाको मृत्यु भएको जनाएको थियो । तर मृत्यु भएको भनिएका ङिमा […]
अस्ट्रेलिया आफ्नै देश फर्क भन्छ, नेपाल आउन पाइँदैन भन्छ । हामी के गर्नु ?
निरु त्रिपाठी गत शुक्रबार अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले पत्रकारहरूसँग बोल्दै भने –विद्यार्थी भिसा, भिजिटर भिसालगायत अस्थायी भिसामा आएका व्यक्तिहरू अहिलेको अवस्थामा आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सकिँदैन भन्ने लाग्छ भने आफ्नो देश फर्किनु उत्तम हुन्छ। अझ उनले आफ्नो कुरा थप्दै भने – यो महामारीमा सरकारको घोषणा गरेको सुविधाहरू आफ्नो नागरिक तथा स्थानीय बासिन्दालाई हो र उनीहरु […]
२३ चैत । न्युयोर्क : कोरोना भाइरसबाट सबै भन्दा धेरै प्रभावित बनेको अमेरिकाको न्यूयोर्क शहरमा थप एक नेपालीको निधन भएको छ। न्युयोर्कको क्वीन्स ग्रयाण्ड एभिन्युमा बस्दै आएका अजयमान छोंचुँको आइतबार निधन भएको छ। केही दिनदेखि बिरामी रहेका उनको उपचारकै क्रममा निधन भएको आफन्तहरुले बताएका छन्। झण्डै दुईसाता अगाडि परीक्षण गर्दा छोंचुँ र उनकी श्रीमतीमा कोरोना […]
अमेरिकामा ५ सय नेपालीमा कोरोनाको सङ्क्रमण, एक जनाको निधन
अमेरिकामा विभिन्न तरिकाले बसोबास गर्दै आएका नेपालीमूलका अमेरिकी तथा नेपालीभाषी पनि कोभिड–१९ को चपेटामा परेका छन् । अहिलेसम्म नेपालीमूलका एक जनाको निधन भएको छ भने करिब ५०० कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको जनाइएको छ तर यसको स्वतन्त्ररूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन । अमेरिकामा रहेका नेपाली कति सङ्क्रमित भएका छन् भन्नेबारे आधिकारिक रूपमा बताउन कसैले पनि सकेका […]